O2 waxay siisaa dhammaan macaamiisheeda 30GB xog ah oo ay ugu wacan tahay Coronavirus | War gadget
O2 waxay siisaa dhammaan macaamiisheeda 30GB xog ah oo ay ugu wacan tahay Coronavirus
Waxaan ku jirnaa heegan caafimaad dalka oo dhan, tani waxay sababtaa dad badan oo lagu qasbo inay ka shaqeeyaan guryahooda. Shirkadda Movistar ee hoosaadka taleefanka waxay kula xiriirtay dhammaan macaamiisheeda Email si ay ugu muujiso midnimo dhammaantood, iyagoo siinaya gunno dheeraad ah 30GB xog gebi ahaanba bilaash ah qofkasta oo ubaahan.
Tilmaam noocan oo kale ah ayaa lagu qanacsan yahay waqtiyada sidan oo kale ah, halkaas oo dad badan lagu qasbay inay ka tagaan shaqooyinkooda si ay uga shaqeeyaan guryahooda. Sidan oo kale, haddii aanaan ku xirneyn WiFi guriga, waxaan ka faa'iideysan karnaa kuwa dheeraadka ah ee 30Gb ee O2 na siinayo.
Cabbirkani wuxuu si toos ah kuu saameynayaa adiga oo ah macmiil O2 ah, laakiin waxaan sidoo kale dooneynaa inaan kugu wargalinno in Telefónica, ay astaan ​​u tahay Movistar, waxay hirgalisay talaabooyin kale iyada oo la raacayo waxyaabaha ay ka kooban tahay telefishanka kuwaas oo lagu dabaqi karo haddii aad tahay macaamiil Movistar iyo in kale oo laga yaabo inay ku xiiseyso (tusaale ahaan, haddii aad u baahan tahay waxyaabaha carruurta ka kooban). Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha la sheegay, guji Halkan
Sida loo helo GB dheeraad ah
Habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee loo sameeyo waa in la kiciyo gunnooyinka xogta dheeriga ah ee 5GB ee horay loogu heli jiray barnaamijka O2 macruufka o Android.
Waxaad heli doontaa 6 foojar oo 5GB ah oo bilaash ah bil kasta, oo si aad u codsato, waa inaad marin u heshaa moobiilka oo aad dhaqaajisaa. Waxaa lagu dabaqi karaa si shaqsi ah khadka kasta ee mobilada ee aad ku leedahay O2. Iyagu wax lacag ah kama qaadi doonaan iyaga waadna dhaqaajin kartaa wakhti kasta oo bisha ah. Haddii aynaan weli diiwaangashanayn oo aynaan haysan magacayaga iyo lambarkayaga sirta ah, gelitaanku wuxuu u fududaan doonaa sida gelitaanka lambarka taleefankeenna, waxaan heli doonaa SMS tilmaamaya lambar aan ku marinno APP.
Xusuuso taas biilasha waxay bilaabantaa 18-ka bil kasta waxayna ku egtahay 17-ka bisha xigta. Haddii aad u baahato, waxaad dib uga kicin kartaa abka isla markiiba. Hindisahani wuxuu soconayaa 2 bilood Hada, markaan arkay sida mowduucu yahay, layaabi maayo hadii dalacaad la kordhiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » O2 waxay siisaa dhammaan macaamiisheeda 30GB xog ah oo ay ugu wacan tahay Coronavirus
Sida loogu biiro liiska Robinson si loo joojiyo helitaanka xayeysiinta taleefanka, boostada, iwm.